netzay.com.mm : Myanmar Online Shopping, Shopping Websites:netzayမှာ ဘယ်လိုဈေးဝယ်မလဲ?
Customer များလွယ်ကူရှင်းလင်းစေရန် Netzay မှာဈေးဝယ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို တစ်ဆင့်ချင်းရှင်းပြပေးထားပါတယ် ။ ဈေးဝယ်သည့်အခါတွင် Log In ၀င်ပြီး ဈေးဝယ်ခြင်းနှင့်အကောင့်မဖွင့်ဘဲဧည့်သည်အဖြစ်ဈေးဝယ်ခြင်းဟူ၍ပုံစံနှစ်မျိုးရှိပါသည်။ အကောင့်ရှိပြီးသူ Log In ၀င်ပြီးဈေးဝယ်သည့်ပုံစံနှင့် အရင်ဆုံးရှင်းပြထားပါတယ်။
အဆင့်(၁) Log-In ၀င်မယ်
Account ရှိပြီးသူများက Log-In ၀င်ပေးရပါမယ်။
သင့် Username နှင့် Password ကိုဖြည့်ပြီး Log-In ၀င်မည်ကိုနှိပ်ပါ။
netzayမှာ ဘယ်လိုအကောင့်ဖွင့်မလဲ? ကိုကြည့်၍ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
FaceBookအကောင့်ရှိသူများက လဲ Facebook အကောင့်ဖြင့် Log-In ၀င်နိုင်ပါသည်။
ထိုအခါ ကွန်ပျူတာ (သို့) ဖုန်းထဲတွင်Facebook အကောင့်ဖွင့်ထားပြီးရှိပါကအလိုလျောက်ဝင်သွားမည်ဖြစ်ပြီးဖွင့်ထားခြင်းမရှိပါကFacebook တွင်သင်Facebook သို့ဝင်သည်အတိုင်း Email(or)Phone number နှင့် Password တို့ကိုဖြည့်သွင်းပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(သင်Facebook account ရှိ Data များပျောက်ဆုံးခြင်း၊ ပျက်သွားခြင်း၊ အကောင့်Hack ခံရခြင်း၊ သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ အခြားသူထံပေါက်ကြားခြင်းလုံးဝမရှိပါ၊ သင့်အကောင့်လုံခြုံမှုကို 100% တာဝန်ယူပါသည်။ထို့ကြောင့်Facebook ဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချစွာအကောင့်ဖွင့်နိုင်ပါသည်။)
ကဲ log-In ၀င်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဈေးစတင်ဝယ်လိုက်ကြရအောင် ….
ရောင်းချပေးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရှာဖွေကြည့်ရှု၍သင့််နှစ်သက်သောပစ္စည်းကိုတွေ့လျှင်ထိုပစ္စည်းကိုကလစ်နှိပ်လိုက်ပါ။ထိုပစ္စည်း၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ထပ်မံတွေ့ရပါမည်။
သင်နှစ်သက်ပြီးနောက်မှဝယ်ယူရန်မှတ်ထားချင်သောပစ္စည်းများကို Like ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။သင် Like ပြုလုပ်သောပစ္စည်းများကိုမှတ်ထားပေးပြီးသင်ပြန်ကြည့်လိုသောအချိန်(သို့)၀ယ်ချင်သောအချိန်တွင်ပြန်လည်ရှာဖွေနိုင်စေရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။
ပစ္စည်း၏ Link ကို တခြားသူများထံသို့ အီးမေးလ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
ပစ္စည်းရောင်းချပေးသောကုမ္ပဏီနာမည်ဖြစ်ပါသည်။ထို့ Link မှကုမ္ပဏီ၏ပစ္စည်းများကိုတစ်နေရာထဲတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်။
ကုန်ပစ္စည်း၏ အမှတ်တံဆိပ် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ Link မှအမှတ်တံဆိပ်တူပစ္စည်းများကိုတစ်နေရာထဲတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်။
ပစ္စည်းကို ၀ယ်လိုလျှင် နှိပ်ပါ ။ Box တစ်ခုကျလာပါလိမ့်မည်။
သင်ဝယ်မည့်ပစ္စည်းကို ဈေးဝယ်စာရင်းထဲထည့်လိုက်သည့် message box ဖြစ်ပါသည်။
သင်ဈေးဆက်လက်ဝယ်ယူဦးမည်ဆိုပါကContinue Shopping ကိုနှိပ်ပါ။
(မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် ဈေးဝယ်သူများအတွက်ဈေးဝယ်စာရင်းသည် ထို့သို့ပေါ်မည်ဖြစ်ပါသည်။)
အဆင့်(၃) ဈေးဝယ်စာရင်း စစ်ဆေးခြင်း
ကုန်ပစ္စည်းဖယ်ရှားလိုပါက ပစ္စည်းဘေးရှိ တွင်အမှန်ခြစ်ပေးပါ။ ထို့နောက် ဈေးဝယ်စာရင်းကိုပြင်ဆင်မည်ကိုနှိပ်ပါ။
ပစ္စည်းအရေအတွက်ကိုအတိုးအလျှော့ပြုနိုင်ရန်အရေအတွက်အောက်ရှိ Box ထဲမှပစ္စည်းအရေအတွက်ကိုအတိုးအလျှော့လုပ်နိုင်ပါသည်။ထို့နောက်" ဈေးဝယ်စာရင်းကိုပြင်ဆင်မည်"ကိုနှိပ်ပါ။
ကုန်ပစ္စည်း၏ ရွေးချယ်၍ ရသော အရွယ်အစား၊ ဆိုဒ် တို့ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။
ကူပွန်ရှိလျှင်ကူပွန်နံပါတ်ကိုရေး၍ ကူပွန်သုံးမည်ကိုနှိပ်ပါ။ လက်ဆောင်ကတ်ရှိလျှင်လက်ဆောင်ကတ်နံပါတ်ထည့်ပေးပါ။
ငွေမချေခင် ၀န်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်သောအချက်များကိုဖတ်ပေးပါ။ သဘောတူလက်ခံပါကအောက်ဖော်ပြပါဘေးတွင်အမှန်ခြစ်ပေးပါ။
ထိုနောက် ငွေပေးချေမည်ကိုနှိပ်၍ ငွေချေခြင်းကိုစတင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါပြီ။
သင်သည့်အကောင့်မဖွင့်ရသေးပါက ကိုနှိပ်ပြီး “netzayတွင်ဘယ်လို့အကောင့်ဖွင့်မလဲ’’ ကိုကြည့်၍ဆောင်ရွက်ပါ။
ဧည့်သည်အနေဖြင့်ဈေးဝယ်နိုင်ရန်အတွက် ကိုနှိပ်ပါ။ဇယားကျလာပါမည်ထိုဇယားတွင်သင်နာမည်၊ငွေချေရန်လိပ်စာ၊ဖုန်းနံပါတ်တို့ကိုသေချာစွာဖြည့်သွင်းပြီးဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည်ကိုနှိပ်ပါ။(Facebook ဖြင့်အကောင့်ဖွင့်ထားသူများလည်းပထမအကြိမ်ဈေးဝယ်စဉ်တွင်ထို့ဇယားကိုဖြည့်စွက်ပေးရပါမည်။နောက်တစ်ကြိမ်ဝယ်၍လိပ်စာမပြောင်းလျှင်ထပ်ဖြည့်ရန်မလိုပါ။) အဆင့်(၄.၂)မှစတင်ပါ။
သင့်အကောင့်တွင် ဖြည့်သွင်းထားသောလိပ်စာ ကျလာမည်ဖြစ်သည်။
ငွေပေးချေမည်လိပ်စာနှင့် ပစ္စည်းပို့ပေးရမည်လိပ်စာသည်တစ်ခုတည်းဖြစ်ပါက ထိုလိပ်စာ၂ခု တူညီနေရန် ဂရုစိုက်စစ်ဆေးပေးစေလိုပါသည်။
ပစ္စည်းပို့ပေးရန်လိပ်စာသည်ငွေချေရန်လိပ်စာနှင့်တူညီပါက သင်ထပ်မံရွေးချယ်စရာမလိုအပ်ပါ၊ မတူညီပါကထိုလိပ်စာကိုကလစ်နှိပ်၍လိပ်စာအသစ်ထည့်ပေးမည်တွင်လိပ်စာအသစ်ထည့်နိုင်ပါသည်။
NetZay မှ အိမ်တိုင်ရာရောက်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးသဖြင့် ထို့အဆင့်တွင် သင်ဖြည့်သွင်းရန်မလိုပါ။
ငွေချေစနစ်တွင်ပစ္စည်းရန်ငွေချေစနစ်နှင့် MyanPay ဟူ၍နှစ်မျိုးရှိပါသည်။
ပစ္စည်းရောက်ငွေချေစနစ်ကိုသာရွေးချယ်မည်ဆိုပါကရွေးချယ်ပေးစရာမလိုအပ်တော့ဘဲဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည်ကိုနှိပ်ပါ။ ရှေ့သို့ပြန်သွားမည်ဖြင့် ပစ္စည်းပို့ပေးရန်လိပ်စာ ကို ပြန်လည်ပြန်ဆင်နိုင်ပါသည်။
သင်အော်ဒါမှာခြင်း ကို အတည်ယူတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ထို့ကြောင့် သင်စိတ်ကျေနပ်သည်အထိ သင့်ဈေးဝယ်စာရင်း (Shopping Cart) မှ ပစ္စည်းများကို တခေါက်ပြန်စစ်ဆေးနိုင်ပါသေးတယ် ။ သင်မှာယူထားသောပစ္စည်းများ နှင့် ပစ္စည်းလာပို့ရန် ပေးထားသော လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်တို့ကို သေချာစေရန် စစ်ဆေးစေလိုပါတယ် ။
သင်အော်ဒါမှာပြီးပါက netzay မှ သင်ပေးထားသော ဖုန်းနံပါတ်ကို ဆက်သွယ်ပြီး ထပ်မံ အတည်ပြုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ငွေချေစနစ်မှာ ပစ္စည်းရောက် ငွေချေစနစ် ဖြစ်တဲ့အတွက် ပစ္စည်းကို စစ်ဆေးကြည့်ရှုပြီးမှ ငွေချေနိုင်ပါတယ် ။
ကျသင့်ငွေသည်ပစ္စည်းများတန်းဖိုးစုစုပေါင်း၏ ကျသင့်ငွေဖြစ်ပါသည်။ အိမ်အရောက်ပို့ဆောင်ခ သည် သင်နေထိုင်ရာ မြို့နယ်(သို့) မြို့အပေါ်မှုတည်၍ အပြောင်းအလဲရှိပါသည်။ စုစုပေါင်းသည် ပစ္စည်းပေးပို့လာသည်အခါသင်ပေးချေရမည် ကျသင့်ငွေဖြစ်ပါသည်။ သင်အော်ဒါကိုအတည်ပြုပြီးပါက ဆက်လက်လုပ်ဆောင်လုပ်ဆောင်မည်ကိုနှိပ်ပေးပါ။
သင်မှာယူသောပစ္စည်း၏အော်ဒါနံပါတ်ဖြစ်ပါသည်။ အော်ဒါအသေးစိတ်ကို ကြည့်ရန်နှိပ်ပါက သင်အော်ဒါအသေးစိတ်ကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
စစ်ဆေးပြီးပါက ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည် ကိုနှိပ်ပါ။သင် အော်ဒါမှာခြင်း အောင်မြင်စွာပြီးစီးပါပြီ။ သင့်အော်ဒါကို ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ လက်ခံရရှိသည်နှင့် ဖုန်းဆက် အကြောင်းကြားမှာဖြစ်ပြီး မကြာခင်ရက်ပိုင်းအတွင်း သင်မှာထားသော ပစ္စည်းကို အိမ်အရောက်ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည် ။
ကဲဒါဆို NetZay မှာစပြီးဈေးဝယ်လိုက်ကြရအောင်…..ပျော်ရွှင်သော နေ့လေးဖြစ်ပါစေ ..